Posted by natray natray | April 02, 2017	| PROMOTION |
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော Customers များ ခင်ဗျာ…မကြာခင်မှာ အတာတန်ခူး နှစ်သစ်ချိန်ခါကို ရောက်ရှိတော့ မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ယခု လို နှစ်သစ် ရုံးပိတ်ရက် ရှည် မှာခရီး သွား ဖို့ ပြင်ဆင် နေသူ တွေ အတွက် ရော၊ နှစ်သစ် အချိန် အခါ မှာ လူကြီး သူမ တွေ အတွက် ဂါရဝကန်တော့ကြ ဖို့ စီစဉ်နေသူ အတွက် ပါ ကျွန်တော် တို့ Hedgren မှ အထူး အစီအစဉ် တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးချင် ပါတယ်..
အဲ့တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Hedgren ရဲ့ တန်မှတန် “မဟာသင်္ကြန် အထူး လျော့ဈေး” အစီအစဉ် ပဲဖြစ်ပါတယ်.. ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ မှ ဧပြီလ (၁၁) ရက် နေ့ထိ ရာင်း ချပေး သွား မှာ ဖြစ်တာ မို့ ..ယခု လို အထူး အခွင့် အရေး ကို လက်လွတ် မခံ ပဲလာရောက်အား ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ…
အထူး လျော့ဈေး အစီအစဉ် ကို Hedgren Brand ရှိတဲ့ Casabella showroom များ မှာ အပြင် ဧပြီ ၁၀ ရက် နဲ့ ၁၁ ရက် များ မှာ Junction Square ရဲ့ City Mart တိုရဲ့ promotion area မှာ လည်း ခင်းကျင်း ရောင်းချ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ပျော်ရွှင် စွာ ခရီးသွား နိုင်အောင် လာရောက် အားပေး ကြဖို့ ထပ်မံဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ…
#Hedgren #Luggage #Travel #Bags #Thingyan #New_Year #water_festival#promotion
Yangon: 22, Pyay Road,9Mile, Yangon. (Tel: 01-664363, 660769)
NayPyiTaw: Ocean Ottaya Thiri, Ground Floor. (Tel: 0973139698)
Happy Father’s Day Special Promotion